Kanto vaovao: misy ny maniry hanangana federasion’ny mpanao tatoazy | NewsMada
Kanto vaovao: misy ny maniry hanangana federasion’ny mpanao tatoazy
Tanterahina androany, eny amin’ny foiben’ny ADMC-Craam eny Ankatso, ny famelabelaran-kevitra iray, izay inoana fa hitondra fiovana eo amin’ny tontolon’ny zavakanto eto amintsika. Tompon’ny tsirin-kevitra amin’ny « Tatao », lohatenin’ny hetsika, Rasolofondrabe Radasman Jeanni, mpanakanto mpanao tatoazy, sy Randria Solofonantenaina Mika, mpanoratra, fantatra amin’ny anarana hoe Vanga.
Horesahina mandritra ity tontolo andro ity ny mahakasika ny tatoazy sy ny tontolony : manan-tantara ve ity zavakanto miraikitra amin’ny hoditra ity ? Misy ny mihevitra fa mikomy ireo sokajin’olona manao azy ireny. Misy koa ireo manao tatoazy amin’ny vatany, noho ny fahitany fa kanto izany. Samy horesahina avokoa ireo.
Hitohy amina atrikasa hoenti-mandinika lalina, mikasika ny fanaovana tatoazy eto amintsika, ity hetsika androany ity. Heverin’ireto tanora ireto fa tsy mijanona fotsiny amin’ny hoe lamaody na fironana na koa fitiavana te hiavaka fotsiny ny fanaovana tatoazy, fa zavakanto feno, toy ny zavakanto rehetra. Aorian’io atrikasa io, mbola hitohy ny asa fanentanana, ho fangatahana amin’ny fametrahana ny federasion’ny mpanao tatoazy matihanina.